China Insulating film ukunqanda abavelisi ukukhanya kwelanga kunye nababoneleli | JiBao
Ifilimu yokukhusela ukukhusela ukukhanya kwelanga
Kukho iindlela ezintathu ezisisiseko zokufudumeza ubushushu: ukuhanjiswa kobushushu, ukuhanjiswa, kunye nemitha. Uninzi lokutshintshwa kobushushu kwizakhiwo luyisiphumo sokudityaniswa kweendlela ezintathu. Ifilimu ye-Jibao ebonakalisa ubushushu obuncinane, ekhupha ubushushu obuncinane kakhulu, isetyenziswa kakhulu ekugqumeni amaphahla kunye neendonga.
Indlela yokuhambisa ubushushu (ngaphandle kwefilimu ebonakalisayo): umthombo wokufudumeza-i-infrared magnetic wave-amandla obushushu anyusa ubushushu beethayile-ithayile iba ngumthombo wobushushu kwaye ikhupha amandla obushushu-amandla obushushu anyusa ubushushu bophahla-uphahla luba ngumthombo wobushushu kwaye ikhupha amandla obushushu-ubushushu be-ambient yangaphakathi buyaqhubeka.
Indlela yokuhambisa ubushushu (enefilimu ebonakalisayo): umthombo wokufudumeza-i-infrared magnetic wave-amandla obushushu anyusa ubushushu beethayile-ithayile iba ngumthombo wobushushu kwaye ikhupha amandla obushushu-amandla obushushu anyusa ubushushu bomphezulu wefoyile ye-aluminium-ifoyile ye-aluminium ikhupha ukukhutshwa okuphantsi kakhulu. kwaye ikhupha ubushushu obuncinci bamandla-ngaphakathi Gcina iqondo lobushushu elipholileyo kwindawo.
Inokufakwa eluphahleni, eludongeni okanye emgangathweni ukuvimba amandla ashushu esakhiwo ngaphandle. Ineendonga zokumelana nokunyuka ngokukhawuleza kunye nokuhla kweqondo lokushisa.
1. Uphahla, udonga, umgangatho;
2. I-air conditioner kunye nebhatyi yesifudumezi samanzi;
3. Khusela umaleko wangaphandle wemibhobho yamanzi kunye nemibhobho yokungenisa umoya.
Ifilimu yeAluminized yimathiriyeli yokupakisha eguquguqukayo eyenziwe ngokugquma umaleko obhityileyo wealuminiyam yentsimbi kumphezulu wefilimu yeplastiki. Indlela esetyenziswa ngokuqhelekileyo yindlela yokucoca i-aluminiyam yokucoca, ekukunyibilika kunye nokukhupha i-aluminium yensimbi kwiqondo lokushisa eliphezulu phantsi kwe-vacuum ephezulu. , Umphunga we-aluminium ufakwe kumphezulu wefilimu yeplastiki, ukuze umphezulu wefilimu yeplastiki ibe nentsimbi yensimbi. Ngenxa yokuba ineempawu zefilimu yeplastiki kunye nentsimbi, iyinto ephantsi, intle, ikumgangatho ophezulu, kunye nesixhobo sokupakisha esisebenzayo.
Ngaphambili: I-Rainscreen Cladding Breather Membrane
Okulandelayo: Umenzi uvelisa ifilimu echasene nelanga
Abavelisi bavelisa imibala eyahlukeneyo ye-anti-ul...
Umgangatho ongaphantsi koMgangatho woMphunga, Umgangatho wangaphantsi odadayo, Ilaphu elingalukwanga, IVinyl Plank yoMgangatho woMvalo woMvalo, Isithintelo soMphunga kuMacala omabini eInsulation, Froth-Pak,